July 24, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 43
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa bilaabay la kulmida dhinacyada dawladdiisa, isagoo kala hadlaya arrimaha ku saabsan magacaabida 11 Senator oo Puntland u matali doona Aqalka Sare ee dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, isagoo diiradda saaraya dhammaan dhageysiga xubnaha uu doonayo in uu ku soo saaro wareegto Madaxweyne.
Deni ayaa dadaal-galinaya sidii ay 11ka xubnood u noqon lahaayeen kuwa gudaha sumcad ku leh, sidaas oo kalena wax kabedelida hanaanka mataalada ee Dawlad gobaleedka Puntland, iyadoo ay inta badan xubnaha Aqalka Sare lagu eedeeyo in aysan la imaanin matelaadii ay ka rabtay Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa kulamadiisa ugu horeeya la yeelan doona Madaxweyne kuxigeenka iyo guddoonka baarlamaanka, sida ay xaqiijinayaan Ilo ku dhaw-dhaw, isagoo diiradda saaraya sidii u qancin lahaa samiqeybsiga beelaha ka hor, inta aan la gaarin soo saarida liiska rasmiga ah ee xubnaha.
Sidaas oo kale damaciisa kuwajahan in Kuraasta ay noqdan xubno hadhaw u codeynaya doonista Puntland ayaa kamid ah arrimaha ay dhammaan dhinacyada ka wada hadlayaan, iyadoo ay xogo madax banaan xaqiijinayaan in Siciid Deni uu kamid noqonaya musharaxiinta sannadkan u ordaya xilka Madaxweyne-nimada Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhawaan kasoo laabtay safaro uu ku tagay Imaaraatka Carabta & Kenya, isagoo Imaaraatka kala soo hadlay arrimaha ku wajahan doorashooyinka Federaalka & sidii ay hankiisa ugu taageeri lahaayeen, waxaana warar madax banaan cadeynayaan in uu taageero dhaqaale ka heli doono.
Inkasta oo ay go’aanka leedahay Madaxtooyada Puntland liiska soo saarida, haddana beelaha ayaa saami qeybsigooda eeganaya, taas oo lafilayo in ay culeys ku saaraan Madaxweynaha Puntland.
Maalmaha soo socda ayaa lafilayaa in ay Puntland soo saarto xubnaha Aqalka Sare oo ka kooban 11 xubnood, kuwaas oo ay dooran doonan baarlamaanka Puntland.
Waxaan MADAXWEYNAHA IYO RAISU BARLAMAANKA ka codsanaynaa in aysan soo celin xildhibaanadii fadhiidka ahaa oo nacamleen jidhay XAAR FARMAAJO.
Xildhibaanada soo noqonaya waa in ay ugu horeeyaan Xildhibaan JARUULI iyo CABDIRAXMAAN FAROOLE oo ah halyeeyo PUNTLAND.
Dhamaan xildhibaanada PUNTLAND oo mucaaradka ahaa waa in aysan soo noqon. Xildhibaan aan u shaqeen danaha PUTNLAND waa in aan la soo celin.
Somalia Politicab Analysis says:
Farmaajo vs Deni/Madoobe
Marexaan vs Majerteen/Ogaden
Reer Diini vs Maxamud-Salebaan/reer Cabdile
Farmaajo vs Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Marexaan vs Habar Gidir
Reer Diini vs Cayr
Kulane Jiis Vs Rw Rooble
Muslim vs Mareexaan ayaa dhacday hadda ka hor dagaaladii sukeeye,waxba waa laga qaadi waayey, in habaarka lagu dayo hartay.
AW MUSE says:
Duf ku bax doqontiiya ilkayar goormay wax ahaayeen maxaad ka hadlaysaa maad wax kira ka hasho
Anigu waxaa Oran lahaa siyaasiyiinta caanka ah soda Cali Xaaji Warsame,Juxa iyo kuwo kale oo dhooban ha raadsadàan qabashada kuraasta labada aqal ee Puntland taasi waxay wax ka taraysaa siyaasiyiinta cusub ee markay halkaa tagaan ayakoo markoodii horena qurbaha kasoo orday markay meesha tagaaniina kaba dhego la’a Puntland iyo waxay tahay markay xilka helaan,lana shaqaysta xukuumadda Xamar markay cunaqabateynta Ku hayso maamulkooda,ficil iyo hadal toona muujin karin.
Runtii, Cabdi Faarax Juxa iyo Cali Xaaji Warsame mansabkoodu kaweyn xildhibaannimada Aqalka Sare ee Xamar. Waa labada halyeey ee ay Puntland calfan wayday, nasiibarradeeda.
Sidaasoo ay tahay, waa in inta doorashada dambe ee Puntland kahorreysa ay xubnahaas kamid ahaadaan oo weliba iyaga iyo Faroole majaraha uhayaan.
Siyaasiga keliya ee aan kuhaanweynahay inuu Puntlandna asalka ah dib usoonooleyn karo oo mansabkeedii iyo martabaddeedii laga gabay gaarsiin karo waa Cabdi Faarax Juxa.
Ilaahay ha ubarakeeyo, Juxa waa siyaasi rugcaddaaya iyo aftahan codkarnimo iyo fiiradheeri lagu galladay, khudbadahiisana waxaan kadhadhansaday inaynu argatida iyo dareenka Puntlandnimo 100% kasimannahay oo uu barteedii dhigi lahaa.
*Raalli ka ahaada qaladaadka qoraallada iga gala; qalabka ayaa ereyada badankooda iskiisa uhiggaadsada – naargale alantiis!
Dhuusta meesha kala bax!
11 tallaalkii Tigree jaceelka lagu soo duray ayuu la imaanayaa Zinjibaarigu,isagoo isu haysta in uu cirka iyo dhulka kala hayo,dhafoor culuskaas.
@ Jubalandner/ ilkayar adeer Dani waa wiil taagtay waa wiilka Ini fargaajo futada farti ka galiyay riyadiisiina beeniyay taladii dalkana banaanka ka dhigay waana ka adkaaday ini fargaajo waana ini libaax sanka taabte waa duriyadii Keenadiid iyo Boqor Cismaan. Ini fargaajo Iyo ilkayar filmkoodii eeybaa cunay.
Adeerkaa Daniel dhuusa weyne meesha Masayr ayuu la fadhiyaa, Mareexaan nacayb, that’s all,adiga xitaa,nacaybka aad Mareexaan u qabto maa qarsan karaysid,waaba ku naaxnaa jaalle.
“Muslim vs Mareexaan”: macnuhu waa dagaal Muslimiin iyo Mareexaanka dhexmaray oo Mareexaanku gaalo ahaayeen.
Cajiib! Ma sidaasaad Mareexaan kutahay boowe?
Bal noo faahfaahi dagaalkaasu xilliga uu dhacay, waa taariikh nagucusub ee.
@ Awlal waa dagaalkii Dhabayaco,qaarmadoowe iyo Cagdheer oo is wata ay ku qaadeen Mareexaanka Jubooyinka1991/92 saddex maalmood ka bacdi ayaa lasoo qabtay kii hoggaaminayey,ina Cumar jees aka Caasha caydiid, Baardheere ayaa la keenay,ugaaskii Sade ayaa dhallin yaradii soo qabatay ku dhahay,iska sii daaya qofkaan dhiigga xun, gurigii ugaaska ayaa lagu diley yaan la dhihi,waa la qaaday Kismaayo tuulo u dhow ayaa la geeyey,carar ayaa la dhahay.dhowr isbuuc ka bacdi dagaalkii ayuu mar labaad soo galay isagoo cararaya ayaa xabad futada uga dhacday ayaan maqlay,dib dambe uma uu soolaaban,jigjiga ayuu ka dhacay. Adeerkaa Axmaq Madoowe isaguna Jigjiga iyo qorraxeey ayuu ku dambeyn doonaa.
Muslim nimada qaado,adinka ayaa la dagaalamay Muslim Sayid Mohamed Cabdille Xasan dhoocilihii dhabarka ka jibiyey miyeeydnaan ahayn,Boqorka aad ku faantaa soo maa ahayn kii Gabadhiisa xaaraam ku siiyey askarigii Ingiriiska ahaa( Amina boqor cismaan) maa sii waxaa?
Masii wadaa ayaan ka waday
Doorashadaan hada la filayo waa tii ugu horeysey ee haba yaraatee la saadaalinkarin natiijadada ay ku dambeyn doonto
Waxaad tahay kaddaab aan xishoonayn; xitaa ka yaxyaximaysid inay joogaan dadkii goobjoogga u ahaa amase ogaa wixii sannadahaas dhacay? Goormaa Mareexaan iyo ina Jees dagaalka tooska ah dhexmaray? Goormaa ina Cumar-jees Baardheere la geeyey amase tegayba?
Marka qura ee ina Cumar-jees iyo ciidan Mareexaan dagaal dhexmaray waxay ahayd markii ciidan uu wato General Morgan oo Mareexaan u badan ay Kismaayo ka qabsadeen huwantii ina Cumar-jees iyo USC 1992/93, ina Cumar-jeesna Xamar buu u jihaystay.
Ma tihid Mareexaan; waxaad tahay faraca kuwa awooweyaashood lagu keenay qowsaarnimada Jubbaland ee cuqdadda qaba. Cuqdad u dhimo!
@A.Arar runtuu waa xaniin badan tahay soo maa aha? Moorgan askari maaba uu ahayn,waardiye ayuu ahaa,anigaa kaa badiya,saciid Morgan ayaa Gedo joogay,walaalihiin ka yaraa oo dhan ayaan isku iskuul ahayn,adiga waxba kaama weydiinayo,fuley fuley dhalayna wuu ahaa,aad iyo aadna wuu u faani jiray just like anyone of you “weak people” aniguba waa joogay illaa hadda ayaan joogaa,Degmada aad Jubaland ku leedihiin maa noo sheegi kartaa? adiga iyo Doofaar Madoobe,immissa Degmo ayaad ku leedihiin Jubaland? anigu 8 Degmo iyo boqolaal tuuloyin ayaan sheegan karaa, maa shul aadam lahayn ayaad doonaysaa in Kikuuyo xoog kugu siiso aabihi wasoow?
Runta ayaa faraha la iska saarayaa jaalle,wax la qariyo qurun ayaa ku jira.runtu waa xaniin badan tahay, midday kale, Daarood ka aad sheegaysaan hooyadiis haa waso,anigu Mariixmaan ayaan ahay.
Waa kuu sheegay Habaar in uu bilaaban doono😳
JUBBLANDER BEENLOOW ILAAH KA FURTAY.
JUBBLANDER 1991 MAMA KHADIIJO ILKO YAR WAXAAD UGA CARARTEEN GURIGII AY KU NOOLEYD WALAAHI WIILAAL DHAFOOR QIIQ AYAA KA SAARTAY OO QAAR KA MID AH KU DHINTEEN DHAFOOR QIIQ WAXAA WATAY MORGAN.
MARKA FAANKA BEENTA AH JOOJI 1991 WAXAA DAGAALAMAY DAAROOD VS IRIR.
BEEN IYO WAX AAN JIRIN AYAAD ISU SHEEGTAAN.
FARMAAJO WADANI MAAHA WAA DAMBIILE.
1) QALBI DHAGAX AYUU DHIIBAY
2) 3 DEKEDOD AYUU ABIYE U SAXIXAY.
3) DAGALKI AMXAARO VS TIGREE CIYAAL YAR YAR U DIRAY KUMANAAN AH.
4) FARMAAJO WAA KABA QAAD QADAR, ABIYE AHMED IYO AFAWARQE.
MAXAAD KALOOD NOO SHEEGEYSAA.
Alla maxaa xas aynu garaacnay halaq kasoodhacay! Jawaab mac kugu ah Ustaad Arar ayaa kugu dakhray oo digada kaagadhigay.
Tolkeenna Sade waa nasab dun xariir ah iyo xididka Tawxiidka kasoofaracmay ab-ka-ab, inaad cad kulahaynna maanta ayay kugu caddaatay allaylehe.
Subxaanallaah! Waa duul waxa ay kuhadaaqayaan iyo waxa ay qorayaan midna dhaadnayn.
@suldaanka maakhir aka Awlal aka intaas oo magac watoow,Hal eray oo been ah,wallaahi in aysan ku jirin waxa aan soo qoray ama dhiggu ha idin ku karo ama hoos haa u dhaco,awalba dhiig doofaar ayaa idinka buuxaye,mar labaad ayaad dowladaha dariskaa u socotaan ” this time Kenya iyo imaaraad” si aad Somalia u dumisaan,walaalihiin Tigree, mise reer abti ayey idiin ahaayeen,islaan wiil qowsaar ah wadata qisadeeda waa maqlay.maxaad kulligiin Hal mar u qaylinaysaan? Ducufo baa tihiin,si loo doodo iyo si loo dagaallammo midna maa garanaysaan, dagaalka dumarka ayaad taqaannaan,ciddiyaha ayaa raggiinnu ku dagaalamaan sida Adeer Faroole iyo Eedo sacdiya Dani Alla naasa sheer.
Sade soo kuwa aad maalin walba cayda ku wadid maa aha,màa kula tahay in aad cahdaadu wax ka baddali karto,wax badan ayaan qarinayaa, Ceebtaada ayaa meelwalba taalla,waa igu wallaahi.
Halla diido in Majeerteen qaataan 11 xubnood ayadoo maamulada kale 8 helayaan.
Maxay Ku Heleen?
Sabtwe loo siiyay?
Alla maxaa jileec,nacsnimo Culusow wax kasta looga saxeexday?
4 maamul oo ayaa 8 xubnood midkiiba helay = 32
2 maamul 22 2 × 11 = 22
Waa xaaraan iyo sadbirsi la rabo in lagu noqdo.
Waa kibreen,waxaysan ahayna isu haystaan iyo inay ayaku ka mudanyihiin umadda.
Tuugo xalaal nooga dhigaayo tastuur,nidaam fadaro ah oo ayaga u sadbursiinaaya weeye Puntland.
No more 4.5
No more sadbursi
Mareexaan Gaajeysan XUKUN Looma Dhiibo?
1)Mareexaan waxaad u tahay waa yaqaan, wuxuu kuu yahayse ma yaqaan.?
Meesha anigu uma soo galin in aan Majeerteen iyo Mareexaan isku soofeeyo ee waxaan usoo galay inaan burburiyo beenta aad ku sheegtay in Mareexaan iyo Ogaadeen dagaallameen oo ina Cumar-jeesna la qabtay!
Bal car wax markhaati ah u ekeen beenahawaasnimada iyo filmka khiyaaliga ah ee aad abuurtay amase bal car nin qura oo ah ragga Mareexaan ee halkan wax ku qora ha kugu raaco. Ku jir kiis-iska-waalkaas iyo cayda.
Inta Baardheere la keenay in ay dilaan ayeey rabeen laakiin Ugaaskii Sade ayaa joogay,shakhsigaan dhiigga xun yaan la igu ceebayn ayuu dhahay,Ugaaskii Sade.sidaa baa lagu sii daayey,Daanyeerkaas dbiigyacabka ahaa.
Nin caaytamay lagabadi ayay maahmaahdu ahayd.
Dabcan, akhyaarta aqoonta iyo waaya’aragnimada doodaha iyo faallooyinka kunaqdiya waxay usooxigtaan caddaymo iyo daliillo sugan oo aan dafiraad lahayd; dagaalkooduna waa mid maskaxeed. Waxaana lagu yaqaannaa inayan cid gaar ah mise cido islaameed toona aflagaaddeyn ee ay ciddii nacasnimo kalasoo duldhacda doodo kulul dubka kagadhiliyaan.
Waxaase jira kuwo fadhi-ku-dirirka kusoo qalinjebiyay oo xanta iyo beenta ay musaska iyo mafrashyada kamaqlaan inta run moodaan iskudaya inay akhyaarta kuharowsadaan oo doodo kulagalaan. Duulkan cid aan naftooda ahayn kama mas’uul aha, reeraha ay kadhasheenna ma matalaan oo afhayeenno rasmi ah uma aha. Waxa afkooda iyo addinkooda lagala kulmo iyaga ayaa uqoolan oo waxkasooqaadna maleh sidoodaba.
JUBBLANDER QADAR, ABIYE IYO AFAWARQE HOOYADAA MIYAA DHASHAY SOO AJNABI MAAHA????
SOO CADOOW MAAHA?
KALLUUNKII SOMALIYA IN JAAD LAGU BEDESHO OK MIYAA????
Dooddan ah Cumar Jees oo maxbuus ah oo dagaal asy wiilal Mareexaan ahi ku soo qabteen ayaa Ugaas Mareexaan loo keenay oo sii daayey, run iyo been aan saxo.
Marka hore meel uu ka dhacay dagaal Cumar Jees iyo Mareexaan u gooni ahaa oo aay Mareexaan ku qabteen ina Jees, laakiin waxaa jiray wax loo ekeeysiin karo:
Markii uu socday dagaalkii USC ee 91kii Siyaad Barre Xamar looga saaray, Cumar Jees oo wato SPM wuxuu soo qabsaday Baay, Bakool iyo qeyb Sh/Hoose kamid, wuxuuna soo fariistay Afgooya iyo Siinka dheer! Intii uu Gobolladaa soo qabsanayeyna wuxuu soo laayey dad badan oo Daarood ah oo Mareexaan xagga Gedo u qaxaya u badnaa iyo wixii Gobolladaa Shaqaalo Fowladeed joogay!
Daarood oo uu duqii. Siyaad Barre ahaa dhex boodayana Kismaayo ayaay iska Xaadariyeen oo Gulufka Cumar Jees “gas” ayaay u siiyeen! Kkk
USC haddii aay Xamar qabsatay, waxaay ku baraarugtey Jees oo Afgooye fadhiga!
Waxaayna yiraahdeen. Aryaa ma Daaroodaa maanta deysmo leh, kan Afgooya noo fadho wuu yahay?! Kkk
Markaas ayaa Cumar Jees iyo xoogaagii uu watay ee Ogaadeenka ahaa xagta la mariyey. Oo aay isaga iyo xoogaagii ka haray Baardheere orod ku tageen. Isaga oo Mareexaan u dirsaday, ergo ahayd in la nabad geliyo oo loo oggolaado in uu Jobbooyinka u sii dhaafo!
Arrintaa oo uu Mareexaan isku qabsaday oo qaar xanaaqsan soo jeediyeen, ninkan waa cadow dad badan laayaye ha la dilo!
Toos oo keentay in dood dheer kadib uu Mareexaan go’aansado, in la nooleeyo isaga iyo waxa oo wato, kadibna xagga Jubbada Hoose la isu dhaafiyo, sidaa ayaana la sameeyey!
Intaas ayaan ka ogahay arrintan doodda iyo dembiga badan idin gelisey!
Sixid. Ma jirin ayaan ka waday, meesha ugu sarreeyso.
Hadii waagaas cumar jees la Bireen lahaa maato badan ayaa ka badbaadi lahayd
Anigu waxaan xusuustaa in ins Cumar-jees markii Afgooye laga soo dharbaaxay uu saldhig ka dhigtay meel qiyaastii u dhexeysa Mareerrey iyo Afmadow oo xitaa halkaas USC uga dabatagtay laakiin uu iska difaacay. Markaas Daaroodku Dhoobley ayey abaabul ka wadeen kadib markii Kismaayo laga qabsaday. Way dhici kartaa in markii Afgooye laga soo jebiyey uu soo maray via Baardheere laakiin beenta, dagaalka, iyo maxbuusnimada uu Jubbalander dhoodhoobayo kuna sheegayo inay dhexmartay Mareexaan iyo Ogaadeen waxba kama jiraan. Jubbalander wuxuu isku sidkay xaaladda siyaasadeed ee maanta taagan iyo wixii dhacay horraantii 1990s oo uu siduu jeclaan lahaa u sawirtay.
Ma aha in arrimaha masiiriga ah ee ku salaysan dastuurka iyo hannaanka federalismka loo sawirto halgan u dhexeeya Majeerteen iyo Mareexaan. Reer Puntland kahor Farmaajo — waqtigii Sh. Shariif iyo Xasan Sheekh — ayey dowladda dhexe isku hayeen arrimahaas, waana isku hayn doonaan kuwa Farmaajo ka dambeeya haddii aan arrimahaas xal laga gaarin. Dadka qaarkiis bal arti-gaabnimadooda, ma maxay doonayeen in reer Puntland mustaqbalkooda iyo waxa kala dhexeeya Soomaali — uga tanaasulaan maadaama Farmaajo Daarood yahay. Farmaajo wuu tagi doonaa mar uu tagaba laakiin arrimahan way taagnaan doonaan haddii aan la xallin, taas oo keeni karta in Soomaali kalaguurto. Waxaan oran karaa Farmaajo isagaa beegsaday oo dagaal dahsoon ku qaaday Puntland iyo Jubbaland.
Waddaniyaddu ma aha in dadku ka tanaasulaan dantooda iyo masiirka ummaddooda. Soomaali waxay u baahan tahay inay gasho gar cadaawe iyo gacalada geeedkaa inoo saar oo geela inoo qaybi.
Doorasha ka dib hadii Farmaajo Xafiiska sii fadhiyo wax kasta ha sheegee Xitaa hadii la doorto mar kale waa dagaal Muslim iyo reer Diini u dhexeeya waayo Farmaajo wuxuu rabaa inuu weligi Xoog ku hayso dalka 10 sano kadibna Borqor isu badalo sidii jiib badal bukaasa intaas waxaa u dheer inuu ku dhaartay inuu dalka ka sifayn qabiilada: Isaaq,Ogaadeen, Hiraab iyo Majeerteen. Hada Ogaada arinkani waa qorshaha dhabta ah ee reer Diini iyo Farmaajo.
Waa xaqiiqo in uu Cumar Jees
Uu Baardheere ka soo cidgalay jabkii aay USC iyo Raxanweyn oo Baydhabo kaga kacday ku dhufteen, isaga iyo wixii ciidankiisa ka badbaaday.
Markan iyada ah, Daarood weli Kismaayo lagama qabsan,, Siyaad Barrena Kismaayo wuu ka tagay oo Baardheere ayuu joogay.
Jidka kali ah ee uu Cumar Jees ku qaxi karayna wuxuu ahaa kan aado Baardheere ee Baaydhabo ka baxa.
Cumar Jees markii Baardheere u soo dhowaaday ayuu meel dagey oo Ergo soo dirsaday.
Muran dheer oo Mareexaan dhex maray kadibna, waxaa la go’maamiyey in loo Hilba qalo oo la nooleeyo, kadibna xagga Afmadoow la isu dhaafiyo!
FG. Ma jirin Mareexaan uu dagaal gooni ah dhex maray oo Maxaabiis ahaan u soo qabtay, laakiin wuu awooday in uu dilo oo wuxuu ahaa, nin si xun u soo gabay oo aanan wax tabar ahi hayn, laakiin Mareexaan wuxuu fiiriyey in aay arrintaasi ka dhalan karto, ceeb iyo Colaad hor leg oo Daaroodka ka dhex dillaacdo.
Laakiin marka aad fiiriso dhibaatadii uu Cumar Jees dib ka geystey, waxaay ku fiicneyd Mareexaan in uu dilo oo uusan tonimo xeerin!
Markan aad tiro Afmadoow iyo Jilib dhexdooda ayuu dagey oo uu USC iskaga difaacay, waxaan qiyaasayaa in aay ahayd, mar uu yara tabareystey oo uu tolkii Afmadowna taageero ka helay, Hub faro badnaa oo aay Kenya bixisayna uu “share” fiican ka helay!
Ogaaw marka uu ninkan Daarood sidan u dhibaateeyna, kuwii dad u xigay ee Xamar ku haray Bidsadaha iyo Eeyaha ayaa Xamar ku cunayay hibahooda! Sida Weriyeyaashii uu “Taakeeye” silac dilayey!
Ogaadeen Sheegadkiisa ayuu madax ka dhigtaa, oo aay Daaroodkuna ku sirmaan!!!!!
Farmaajo maalinkii uu xukunka qabtay ujeeddadiisu waxay ahayd inuu ka aarguto sidii looga qaaday xilka ra’iisalwasaaraha iyo inuu u aargudo sidii xukunka looga tuuray Jaalle Siyaad, si taas uu u gaarana wuxuu go’aansaday inuu la kaashado Abiy iyo Afawerqi. Taageeradooda wuxuu dhaafsaday inuu saxiixo badda Soomaaliyeed. Ninka kumannaan dhallinyaro ah ku shubay holaca dagaalka Tigray, ciddii ka sugeysa inuu dan Soomaaliyeed ka shaqeeyo iyagaa gudcur indho ku caddeyn doona.
Afarta sano ee uu kursiga ku fadhiyey tafaraaruqa uu Soomaali dhexdhigay ma dhicin 15kii sano ee ugu horreeyey xukunkii Maxamed Siyaad.
Tan kale, Bal qiyaas waxa xukuumaddii Kacaanku qabatay markii ay afar sano joogtay (1969-1973). Maxamed Siyaad wuxuu ahaa nin aftahan ah oo hadla oo dadka la hadla oo mediayaha la hadla; oo dalka mara oo kormeera; oo aan ku mashquulin jirkiisa sida naagaha makeup iyo timo madoobaysi iyo iscusburin; oo dadka qaabbila oo markii isaga shakhsiyan loola kulmo aan ka dhirfin si kasta oo loo caayo isla markaana wixii lagula heshiiyo ama uu ballanqaado fuliya. Qof kasta oo la dulmiyo oo garsoorku wax u qabanwaayo haddii uu u ergoodo Maxamed Siyaad — amar ayuu bixin jirey isla markiiba la fuliyo.
Farmaajo haddii uu doorashada ku guuleysto waa haddii uu musuq, cagojugleyn iyo laaluush kusoo baxo, taasna ma filayo in cidna aqbali doonto. Haddii laga guuleytana u maleynmayo inuu Villa Somalia kaga baxayo wax aan dhiig iyo xabbad ahayn.
Waad aragteen in Xijaar bixiyey amar ah in aan warqadda dambila’aanta la siin murashaxiinta qaarkood si doorashada looga reebo. Bal eeg xeeladda wasakhda ah ee rakhiiska ah ee Farmaajo ka timid!
Waxaan filayaa in reer Muqdisho ay diyaarsadeen plan B iyo sidii ay ula macaamili lahaayeen Farmaajo –doorasho iyo doorasho la’aanba wixii ka dambeeya. Waxaan filayaa waxyaalaha Mudullood kaga hadlayaan shirka Cadale ay ugu qabsadeen inaan Farmaajo soo faragalin, in arrinkaasi ugu horreeyo. Alloow, kii roon reerka u reeb.
@ A.Afar/ Arar, wax badan lama socotid,qabiil ayaa ku madax maray,intaad qabiilka dhabayaco kor uga baxdo maskaxdaada ka shaqaysii,wax walbo ayaad rabtaan,Dekedihiinii wixii kasoo baxa idinkaa leh,ok that’s alright,anigu Jubaland ayaa ka imid,waad igu haysataa,Degmada aad ka degto adiga oo dhabayaco ah maa Ii sheegi kartaa? anigu 8 Degmo ayaan lee yahay, Kismaayo duurkeeda( miyiga) aniga ayaa deggan,iska daa Gobolka Gedo.nacalla ku yaal baa tahay,anigu Gobolka Bari ama waxa aad ugu yeerto Puta land kuguma haysto,maxaad dhulkayga iigu haysataa?
Tirada dadka Jubbaland:
Harti Darood 20%
Mingis tunto/wiil waamo,Mareexaan sidee Buu gaajo ku noqday? kasoo bilow Doolow,Luuq Ganaane,Buurdhuubo, Baardheere illaa Kismaayo wabiga Jubba ayaa daadsan,Dawa river seasanal asagana waa haystaan,beerahooda ayey fashaan,markii Puta land dhibaatada ka dhacday million iyo bar dollar ayey reer Gedo idinku caawiyeen,abaal laawe
Horta, in la islacnado waa nasiibdarro. Ma taqaan macnaha lacnad? Haddii aadan aqoon, macnaheedu waa caro Alle kugu dhacday. Haddii lagugu raddiyo ra’yigaaga, ma lacnad baad miciin bidaysaa?
Arrinka Jubbaland, waxaan filayaa inaad tahay ciyaalkii kusoo koray xaruuntii agoonta ee Lafoole ee aan nasiib u helin aabbe uu taariikh ka barto. Dadka sidaada u fakera waxay la yaabban yihiin — sida Harti amase Majeerteen degaan ugu yeelan karaan Jubbada Hoose! Waxaa u sawiran sidee Majeerteen ka yimid Bari ilaa Mudug ku degay Jubbaland? Oo Mareexaan sidee ku yimid oo ku degay illeen kulligeen waxaan asal ahaan ka nimid Mudug iyo inta kasii shisheeysa? Sidee Absame oo Kablalax ah ku degay boqollaal kilometer dhul koonfur kasii xiga Jubbaland ilaa agagaarka Laamu iyo galbeedka Tana River (Kenya)?
Haddii Mareexaan dego lix degmo oo Jubbaland ah ma anigaa u diiddan amase ku haysta? Jubbada Hoose weligeed illaa xilligii gumeystaha iyo kahor waxaa ku loollami jirey Harti iyo Absame; xadkii Ingiriisku u jeexay wuxuu ku yaal meel 60km waqooyi galbeed ka xigta Kismaayo. Heshiiskii boqol sano kahor ay saxiixeen Ogaadeen iyo Harti oo Jubbada Hoose loogu aqoonsaday dhul Daarood iyo inaan qolana gaar u sheegan, nuqulkiisii waa la hayaa. Maalinkaa xaggee Mareexaan jirey? Waxaan ka hadlayaa Jubbada Hoose.
Waa shaki la’aan in Mareexaan ka faa’iidaystay xilligii Kacaanka oo ay Ogaadeen riixeen dhul ahaan, waana sababtii Ogaadeenka Jubbaland u gadoodeen iyadoo oo uu hoggaaminayey Bashiir-bililiqo. Marxalad kale waxay ahayd oo ay kusoo durkeen miyiga Jubbada Hoose xilliga ay la xulufoobeen USC iyo ilaa intii ay Kismaayo haysteen. Waa wax caadi ah in xilliga colaadda la isku dalballaarsado. Haddii Mareexaan dego baadiyaha Kismaayo ee Giirgiirtu degi jirtey, ma cid ku doodaysa ha ka guureen?
Haddaba, xaqiiqdu waxaa weeye kahor 1991 90% ee dhismayaasha shacabka ee Kismaayo waxaa lahaa Harti iyo Absame, ciddii waqtigaas kadib wax dhisatayna cidna ugama xuma laakiin waxaan la aqbali karin in lagu doodo in Kismaayo ahayd sidii meel banaannayd oo la helay kadib 1991 oo la isku dayo in dadka leh laga faramaroojiyo. Annagu (Harti & Absame) — Kismaayo annagaa leh. Haddii lasoo watay Mooryaan iyo Argagixisoba si Kismaayo loogu hantiyo laakiin lagu fashilmay, maxaa la sameyn? Ma shaarka dowladnimo ayaa lagu qabsan? Taasna waa fashilantay.
waxa aad meesha ku soo qortay waxba kama jiraan,waa taariikh gacan ku rimis ah,Majeerteen iyo Ogaadeen Hal xaafad ayey ka deggenaayeen Kismaayo,dhowr dukaamo wey ku lahaayeen,sida ay ku yimaadeen Iyo sanadka ay yimaadeen maa taqaan? buugga uu qoray nin ingiriis ah ” Sun Sands and Somalis” akhri online ayuu free ka yahay,buuggaasi wuxuu ka hadlayaa illaa qarnigii 15aad,taariikhda beenta ah oo Majeerteen dhoodhoobteen ayuu kashifayaa,boqortooyada aad ku faantaan, markii uu dhintay boqor Maxamed Daaud oo Mareexaan dhexdiisa is laayey ayaad bilowdeen in aad Hawiye isu boqortaan,waxaad gaareen in aad tirtirtaan taariikhda Mareexaan,Maabkii Cusmaaniyiinta Harar illaa Hobyo illa bariga Somalia waxaa ku qoran Marehaan.1885 tii ayey bilaabanaysaa Majeertenia,sidaa ula soco taariikhda wiil yahow yar.
Kablalax Jubbaland Kingdom (K.J.K) says:
Marexaanow cabaadka iyo calaacalka waa laga fiicanyahay boowe, maanta Kablalax ayaa ka taliya Jubbaland iyo Kismaayo, adiga iyo Farmaajo dameer aan fuushanahay ayaa tahiin. Gedo laftiis hub
Nguri ayaa inooka galay hadi aan Kablalax nahay, waa ku soo socona Gedo…..